Burmese_Poetry – The Art Garden Rohingya
Posts tagged "Burmese_Poetry"
Jul 15, 2021 AGR POETRY
"ရုနျးထှကျကွပါ တို့ရိုဟငျဂြာ" ခဈြကွခငျကွ ဆဆပှားလို့ စညျးကွိုးနှောငျထား တို့လူငယျ မြိုးစအေ့မှနျ ခတျေနောကျမပွနျ တှေးတောကွံဆ ရုနျးထှကျကွ။ စိတျမဆိုးကွေး မတ်ေတာပှားလေ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျ သှေးမကှဲနိုငျ အမြိုးအရေး တို့အရေး ထိပျထားကပြှေနျ တဈထမျးတညျး။ ညီကာစညျးကာ ရှဆေ့ကျပါ အမြားအကြိုး တို့အကြိုး သယျရငျးပိုးရငျး အားဖွညျ့ပါ ခြုံးခြုံးကတြဲ့ အတိတျဘဝ သိမျငယျစိတျရဲ့ ပငျ့ကူအိမျမှ ရုနျးထှကျကွပါ တို့ရိုဟငျဂြာ။ — TTM (အဏ်ဏဝါနီသှေး) (15-07-2021) Editorial Team
“ဂူတာပွငျ” ငါတို့လညျး ပြူ ၊သကျ၊ကမျးယံက နှောလာတဲ့ သှေးနှောတှပေဲ သာကီသှေးဆိုတဲ့ ဒီအနျအကေ မငျးတို့ရဲ့ အရူးထမှုကို လြှာထုတျပွလိမျ့မယျ။ လူသားမြိုးနှယျစု တခုဟာ လူ့တနျဖိုးသိမျဖငျြးသှားလောကျတဲ့အထိအောငျ ယဉျကြေးတဲ့ ကမ်ဘာမှာ ရှိသငျ့တော့လို့လား ။ တိရိစ်ဆာနျလို ခွံခတျပိတျဆို့ထားခံရတဲ့ လူသားမြိုးနှယျစု တခုဟာ လူသားတှရေဲ့ အခွခေံရပိုငျခှငျ့တှေ တားမွဈထိနျးခြုပျခံထားရတဲ့ လူသားမြိုးနှယျစုဟာ လူနဲ့လူခငျြးကို ဘုရားသခငျရဲ့ အခှငျ့ထူးခံလူသားတှအေဖွဈ အားကငြေးမောရငျးသာ မြှျောကွညျ့နရေတဲ့ လူသားမြိုးနှယျစုဟာ ရှိနသေေးတယျဆိုရုံနဲ့ လူသားဆနျတဲ့ အခွားကမ်ဘာသားတှမှော တာဝနျရှိသှားပွီ ။ ဂူတာပွငျမှာ အငျးဒငျမှာ အခွား ကမ်ဘာ့ တနရောရာမှာ မြိုးနှယျစုတခုခုကို ရညျရှယျပွီးသတျဖွတျနတေဲ့ ဂြီနိုဆိုကျတှေ ရှိနရေဲ့။ အတုံးအရုံး သဆေုံးသှားရတဲ့ ကလေးသူငယျ နဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှေ ဘယျလိုပွဈမှု မြိုးနဲ့ သဆေုံးသှားရတယျ သိလိမျ့မယျမဟုတျဘူး ဘုရားသခငျနဲ့တှရေ့ငျ မေးကွလိမျ့မယျ ကြှနျုပျတို့ အခုဆိုရငျ ငရဲက လှတျမွောကျကွပွီမဟုတျလား တဲ့ ။ ။ —ခကျသီ 5-9-2019 မလေ ...
Oct 26, 2020 AGR POETRY
ငါ့ဘဝ ရေးဖှဲ့သူ- Jainwaz Salim @ Ohmmar Win ငယျငယျကပငျ ကုလားကုလား အချေါခံရတာ ထပျခါထပျခါ မကွားခငျြတဲ့ ငါ့ဘဝမှာ အမြိုးမြိုးခှဲခွားဆကျဆံခံရ။ သို့ပမေယျ့ ငါတို့ရိုဟငျဂြာ တနတေ့နေ့ အောငျမွငျလာမှာ ငွိမျးခမျြးရေးကို မြှျောလငျ့ရငျးနဲ့ ခါးခါးသီးသီး ဖွတျကြျောလာရတာ ဇှဲ့မလြော့ဘဲ သတ်တိမှေးကာ အားအငျတောငျ ခညျြ့နဲ့လာခဲ့။ အသကျရှငျဖို့ ရှောငျပွေးရတဲ့ဘဝမှာ နာနာကငျြကငျြ ကြျောဖွတျလာရတာ စညျးစညျးလုံးလုံး ရငျဆိုငျမှုက အငျမတနျ ဂုဏျယူစရာ ငါ့ရပျတညျနိုငျတဲ့ အငျအားတခုပါ။ (26-10-2020) Editorial Team The Art Garden Rohingya
ကမ်းလက်စိတ်တူ နှင်းဆီဖြူ ရေးဖွဲ့သူ- ငြိမ်းချမ်းနဂျမ်း (ရိုခရီးသည်) အဓမ္မဝါဒီ မျိုးချစ်ရေခြုံ အစွန်းရောက်သမားတွေက ငါတို့ရဲ့ အမြတ်တနိုး အလေးအမြတ်ထားတဲ့ ဝတ်ပြုကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီး၊ သော့ခတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း... အချင်းချင်းသိုက်ကွဲအောင် ကြံနေတုန်း…။ လူသားဝါဒကို မြဲမြံစွာကျင့်သုံးနေတဲ့ လူသားစိတ်ရင်းခံဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို ဝင်းလက်စေချင်သူတွေလည်း အသင်ရှင်နေဆဲပါပဲဗျာ။ သန်းခေါင်ယံချိန်ပဲ ဖြစ်ပါစေ၊ လူတွေက အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်း သူတို့ရဲ့ မဟာလူသားဝါဒခံ စိတ်နှလုံးတွေက မအိပ်စက်ရှာဘူး။ သာသနာ့ပျိုးပင် သင်္ကန်းနီနဲ့ ရဟန်းတော်တွေ၊ တပည့်တော်တွေ၊ အမှန်တရားပေါ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသူတွေက မှောင်မည်းနေတဲ့ညကို နှင်းဆီဖြူကိုင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့ လင်းဝင်းစေခဲ့တယ်။ ထိတ်လန့်ချောက်ချားနေတဲ့ သူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးအေးစေရာ ဖြေဆေးဖြစ်စေခဲ့တယ်။ 'နေဝင်တော့မယ် 'လို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ မျက်နှာညှိုးငယ်စွာနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ဝင်၊ ခိုရာမဲ့နေတုန်း။ နိုင်ငံတော်ကို ခြေလေးခုသဖွယ် မလဲမလျှော့အောင် ကာကွယ်နေတဲ့ လူသားဓာတ်ခံ ဓမ္မဝါဒီတွေက နှင်းဆီဖွေးဖွေးနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းမှုတွေ၊ အမုန်းတရားဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ ရန်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြမှုတွေက နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပျံ့နှံ့သွားပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့သား၊ သမီးတွေရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ချစ်ခင်မှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုတွေနဲ့ လင်းဝင်းသွားလို့။ အဓမ္မဝါဒီ ...
May 23, 2020 AGR POETRY
စဉ်းစားဆင်ခြင် လမ်းဖြောင့်မြင် ရေးဖွဲ့သူ- မင်းဝန်ဇော် (၁) မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ဘဲလုပ် မင်းကိုမင်း အဟုတ်၊ အိုအယုတ်။ (၂) လူကို ငှက်ပျောပင်ထင် အိမ်ကို ကျူတောပြင်ထင် ခုတ်လိုက် ရှို့လိုက် မင်းသဘောအလိုက်။ (၃) ပေါ်လာတဲ့ ဒုစရိုက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ မင်းသဘော မပိုက်၊ အိုအမိုက်။ (၄) ယ္ခုတော့ ဓမင်းထောင်ဖမ်း ငါးကလေး မကျန် ဖမ်းတာ မဆန်း၊ အိုအကန်း။ (၅) မင်းက ထန်းလက်နဲ့ မိုးကြိုး ကာမယ်တဲ့ အရူးမှ အရူးဘဲ။ (၆) အချိန်ရှိတယ်ဟဲ့ ရှေ့နေတွေ ဗေဒင်တွေနဲ့ လုပ်ကြဟဲ့ ဆရာဝန်မှားလျှင် တစ်ယောက်သေမှာ ရှေ့နေမှားလျှင် တပြည်လုံးသေမှာ သတိထား။ (၇) သူတို့ဥစ္စာ သူတို့ပေး မင်းတို့ဥစ္စာ မင်းတို့ယူ အဲဒါ အပေးအယူ။ (၈) ...
ဟန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ…တကယ် ရေးဖွဲ့သူ- မင်းမဟာ အထီးကျန်ခြင်းများစွာနဲ့ မြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ညတိုင်းရဲ့ နိဂုံးမလှခဲ့ပေ။ သို့သော် မင်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားလေးက ကိုယ့်ကို အပြုံးမပျက်စေခဲ့ဘူး…တကယ်။ ဟန်ဆောင်ခြင်း ကင်းမဲ့ခဲ့လောဆိုသည်မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးရယ်။ ဤအမှန်တရားတွေအောက်ဝယ် ကိုယ်နေသားကျပြီး အထီးကျန်ခြင်းဆိုတဲ့ ညတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်ပြက်ရယ်ပြုရင်း ဟန်ဆောင်ပြုံးနိုင်ခဲ့ပြီ…တကယ်။ ကိုယ်ပြုံးနိုင်ခဲ့ပြီ…တကယ်။ (၂၃-၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ ဘာလဲ ရေးဖွဲ့သူ- မောင်တင်လှ လူ့အခွင့်အရေးမှာ.. လူတိုင်းမွေးဖွားကတည်းက တူညီတဲ့လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အရေး မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ လူတိုင်းအသားအရောင်၊လိင်၊ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေး တန်းတူညီမျှ မဖြစ်ဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ... လူတိုင်းအသက်ရှင်ခွင့်၊ လုံခြုံခွင့်မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူအခွင့်အရေးမှာ မတရားနှိပ်စက်ခြင်းရှိလို့်လား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ လူတိုင်းတရားဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် လူသားကဲ့သို့ ဆက်ဆံခံခြင်း မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ... ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခြင်း ရှိလို့လား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ အပြစ်ရှိသည်ဟု ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ ထိုသူကို အပြစ်ပေးခြင်းရှိလို့လား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ လူတိုင်းမိမိတိုင်းပြည်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ အရွယ်ရောက်ပြီး ကျား/မတိုင်း မိမိဆန္ဒဖြင့်လက်ထပ်ခွင့်၊အိမ်ထောင် ထူထောင်ခွင့်မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးမှာ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ။ လူအခွင့်အရေးမှာ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ ...
May 21, 2020 AGR POETRY
အမုန်းပန်းရှင် ရေးဖွဲ့သူ- မိုဟမ္မဒ်ရှမီးမ် ဥစ္စာရှိတော့ ဣနြေ္ဒရှင်ထင် သွင်ပြင်ကတော့ ထည်ခန့်ညား စိတ်ဓာတ်ကား မဖြူစင် ဇမ္ဗူတစ်ခွင် မောက်ကြွားဖို့ဆင်...။ မသေခင် ချိန်သာမညမှာ သာပျော်ရွှန်းရွှန်း ဂုဏ်လွှားနိုင်အောင် ထင်ရာစိုင်းရိုက်စား မြင့်ဘဝင်...။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လူမထင် အမြင်ကတော့ ကျဉ်းလျက်နဲ့ ထိုလူမာန် သေကြွရင်လည်း ထိုအကျင့် ပျောက်မယ့်မမြင်...။ သူ့တန်ခိုး ယူဆောင်မသွားနိုင် သူ့အာဏာ ကူကာမတားနိုင် သူခများ အမုန်းဆုဖြင့် ဆုံးပါးသွားသည်ပင်...။ (၂၁-၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
လမ်းမှန် ရေးဖွဲ့သူ- RY Mg Mg Khin ကောင်းတာ လုပ်ပါ မကောင်းတာ ရှောင် စာနာစိတ်နဲ့ သည်းခံစိတ် ကိုယ်နဲ့မကွာ ထားပါလျက် တိုတောင်းဘဝ ရှင်သန်လိုက်ပါ။ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပဓာနာမထား လူသားချင်း တန်ဖိုးထား လောကကြီးမှာ လောဘကင်း၍ အရာရာကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ကျော်လွားကြပါ။ သခင်မြတ်အပေါ် စိတ်ချယုံကြည် သစ္စာသမာဓိ ဘေးယှဉ်လျက် ကြုံဘေးဒုက္ခ ရဲရဲစွမ်းစွမ်း ကျော်ဖြတ်လိုက်မှ လောကလမ်းမှန်လျှောက်သတည်း။ (21-5-2020) Editorial Team The Art Garden Rohingya
တွေးတိုင်း ငိုချင်မိ ရေးဖွဲ့သူ- Royal Hussein တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ... အဆင်ပြေမဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်နဲ့ အားတင်းထားပြီး ခရီးကြမ်းတစ်ခု လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ... အခြေအနေအားလျော်စွာ အေးချမ်းမှုတိုးတက်မှုနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရပေမဲ့ အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ် မပျက်ခဲ့ပါ။ တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ... တိုးတက်ပြီးလူမျိုးလို အမြင်တွေ မကျယ်ပေမဲ့ ကျဉ်းလဲမကျဉ်းခဲ့ စိတ်အစဉ် မြင့်ကျယ်ခဲ့ကြတယ်။ တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေ... ကမ္ဘာကို မမြင်မပတ်ရပေမဲ့ ဘာသာခြားလူမျိုးခြား အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ… သူတို့က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးနဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အနုပညာစာပေ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တတ်သိ ပညာရှင်များကို ရွည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ဝါဒမှိုင်းမျိုးစုံနဲ့ ခြယ်ကာ ရွည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခွဲခြား စီမံအုပ်ချူပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့… တို့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကဓံကြားမှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် ရင်နစ်ကြေကွဲ မသေမရှင် ရပ်တည်နေရပြန်ပြီ။ (၂၀-၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden ...
May 19, 2020 AGR POETRY
ချစ်သောမေမေ ရေးဖွဲ့သူ- ရိုမရုန်(န) အမေ... ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား အစားပျက် အအိပ်ပျက်ကာ ဒုက္ခစုံအပြုံးမပျက်ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါသော သမီးရဲ့ချစ်သောမေမေ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ လူ့လောကသို့ခေါ်ဆောင် ယုယစွာထွေးပိုက်ကြင်နာစွာ နို့ချိုတိုက်ကျွေးလို့ ပိုးမွှားကောင်အန္တရာယ်မှကာကွယ်သော သမီးရဲ့ချစ်သောမေမေ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝမှသည် အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်သည့်တိုင် အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသော သမီးရဲ့ချစ်သောမေမေ မေမေဟာ လမိုက်ညမှာလမ်းပြတဲ့သမီးဘဝရဲ့ ဓူဝံကြယ် အပြောကျယ်တဲ့ ပင်လယ်ထဲ အားကိုးဖို့ လှမ်းဆုပ်မိတဲ့ သမီးဘဝရဲ့ ကောက်ရိုးတစ်မျှင် နွေကန္တာသဲသောင်ပြင်ထဲ အသက်ဆက်စရာ အိုအေစစ်ပါ မေမေ။ ချစ်သောမေမေ မာပါစေ ဆုမွန်မှန်းကာချွေ အနာဟူသမျှ ကင်းစေသား သောကဝေးစေသား မောဟမီးလည်းငြိမ်းပါစေ ရွှေရင်အေးပါစေ လိုတရလို့ပြည့်စေသား ချစ်သမီးတောင်းဆုထား။ ( ၁၉- ၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
ခွင့်လွှတ်ပါ စာကလေးရယ်... ရေးဖွဲ့သူ- ထွန်းလင်စိုး ဆောင်းဦးရာသီ ဝမ်းစာကုန်ဆုံး စပါးမပေါ်ခင် လယ်သမားမွဲတဲ့ ရာသီဆိုရင်လည်းမမှားပေ.......။ ငါငယ်ငယ်ရွယ်က မြူးတူးခဲ့တဲ့ အိမ်ရှေ့တလင်းထဲ ဖျာကြီးခင်းကာ စပါးနေပူလှန်းလို့ စာကလေးအတွက်ပျော်ဖို့နေရာ ငါအတွက် စိတ်ဆိုးစရာ အချိန်ပြည့် စပါးဖျာခင်းငါစောင့်ခဲ့ရ၏။ ဖျာခင်းနားက ငါလစ်ခဲ့ရင် သူတို့ ဆင်းလာ စပါးကောက်စား မေမေအတွက် ပြောကောင်းဟစ် "စာကလေးတွေ စပါးအကုန်စားပစ်မယ်"လို့ မစာနာတဲ့ ငါ့စိတ်လည်း မြင်မြင်ချင်း လွတ်မထားပေ ကြင်နာထောက်ထား ငါမထား စပါးတလုံး မပါစေလိုငှာ တခါတလေ လေးကွနဲ့ ပစ်လို့ စာကလေးတစ်ချို့ကို ငါသတ်ပစ်ခဲ့ရ၏။ ဒါပေမယ့်..... စာကလေးတွေ တစ်နေ့ကုန် စပါးကောက်စားခဲ့သော် တတောင်းမျှပင် စားမကုန်နိုင် တစ်နှစ်လုံး စားပစ်ဖျက်ဆီးခဲ့သော် ငါတို့ တမိသားစုရဲ့ တရက်စာ မကုန်နိုင်တာ ကိုငါမသိပါလေ။ ဩော်....ယခုတဖန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အာရ်ကာန်မြောက်ပိုင်းမှာ လူယုတ်မာ မြန်မာစစ်တပ်တွေက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ လူတွေကို ...
ဝေးသွားတဲ့ အာရ်ကာန်မြေ ရေးဖွဲ့သူ- Unseen Dream Boy သေနတ်သံတွေကြားက လက်နဲ့နားကိုပိတ်လို့ မျက်ကန်းလို ဟိုဒီသွားတိုး။ အသက်တစ်ချောင်း ဆယ်ဖို့ငြား ရှေ့တစ်လှမ်းနောက်တစ်လှမ်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ နတ်မြစ်ဖြတ်တိုး။ အေးရိပ်ရှာတော်ပုံဖြင့် ခိုနားလာတဲ့ ဘင်္ဂါလားမှာ စံစရာ စခန်းစုတ်ထဲ သခင်က ဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့ ဝေးသွားတဲ့ အာရ်ကာန်မြေ။ (၁၈ - ၅ - ၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
ဘဝရယ်...ယခုထိမပြီးနိုင်ပါလား ရေးဖွဲ့သူ- Sahat@Zia Hero Naing ပြေးလိုက် ရှောင်လိုက် ချောင်းလိုက် ပုန်းလိုက်နဲ့ ဟိုးရှေးခေတ်ကပင် ဇာတ်လမ်းစတင် ကိုယ်က ပြေးမယ်ဆို နောက်က လိုက်ပါလာမလား ကိုယ်က ပုန်းနေမယ်ဆို တစ်ခြားလူတွေ အားငယ်မှာလား အော်... ဘဝရယ် ယခုထိ မပြီး နိုင်ပါလား။ ဟုတ်လား တကယ်လား လာတယ်လို့ဆို ဟိုဘက်က ဝင်နေတယ်ဆို အဖွဲ့ပေါင်းစုံဆို ပြေးရမှာပေါ့ ရှောင်နေမှ ကောင်းတာကို အော်... ဘဝ ရယ် ယခုထိ မပြီး နိုင်ပါလား။ သတ်တဲ့ဇောနဲ့ဆို မြင်သမျှအကုန် အပြစ်နဲ့လား ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားလာတာ ဒီဘက်မှာ ကုလား…ကုလား ဟိုဘက်မှာလည်း ဗမာသား ရိုဟင်ဂျာနာမည်က အပြစ်ပဲလား အော်... ဘဝ ရယ် ယခုထိ မပြီးနိုင်ပါလား။ ညမထွက်ရ၊ ဈေးမသွားရ လမ်းမလျှောက်ရ ဆို မလုပ်ပဲနဲ့ စားလို့ရတာကိုး။ ပဲဆီ အုန်းဆီ ...
ထွက်ပေါက်မဲ့လမ်း ရေးဖွဲ့သူ - Jahangir Alom အမုန်းကမ္ဘာထဲ အမှတ်မထင် ရုတ်တရက်ပင် ရောက်လာရလည်း ရောက်သည့်နေ့မှ သေမည့်နေ့ထိ ထွက်ပေါက်ကိုသာ ငါရှာနေရမှာလား။ ဘယ်ဘက်ကြည့်လည်း တောင်တန်း ညာဘက်ကြည့်လည်း ပင်လယ်ကမ်း ဘယ်သူတွေ့တွေ့ လူသားမဆန် စာနာစိတ်က ကင်းမဲ့လှတယ်။ စခန်းထဲမှာ မွန်းကြပ်လွန်းလို့ ကုန်းကြောင်းပြေးကြံ ဖမ်းဆီးခံရ ရေကြောင်းပြေးပြန် ရေနစ်သေရ လေကြောင်းပြေးဖို့ တောင်ပံမပါ ထွက်ပေါက်ရှာရ ခက်စမြဲ။ မညီမညာ ဆူးငြောင့်လမ်းပေါ် ဟိုဟိုဒီဒီ ပြေးဟိုက်ပန်းဟိုက် ကိုယ့်အိမ်ကိုလွမ်း ကိုယ့်ပြည်ပြန်ချင် သို့သော်ငြားလည်း သူ့နိူင်ငံက စခန်းထဲမှာ ထွက်ပေါက်ရှာရင်း ပိတ်လှောင်ခံလို့ အရာမရာက် ငိုင်နေရ၏။ (၁၇-၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
အတ္တထဲ သာယာနေသူ ရေးဖွဲ့သူ- Aejas Ruhol Amin (တောင်ပြို) ဆရာ . . . ဆရာ ​လူ​သူ​ရှေ့မှာ ဆရာလုပ်​ချင်​ ကိစ္စတိုင်းမှာ ဆရာဖြစ်​ချင်​ ဆရာလို့ ​အခေါ် ခံရလျှင်ပင် ဝင့်ကြွား မာန်​တက်​​နေတတ်၏။ ငါတကယ်​ဆရာ ပီသရဲ့လား ဆရာ့ဝတ်​​ငါးဖြာ​ ကျင့်​ပါရဲ့လား ဆရာ့တာဝန်​ ​ကျေပွန်​ဝံ့လား စဉ်းစားရုံနဲ့ ရှက်​မိသွား။ အာစရိယ ဂုဏ်​အင်္ဂါဟာ လွန်​စွာ မြင့်မြတ်​လှပါတကား အတ္တ​တွေကြား သာယာ​နေသည်ကို ပြန်​​တွေးမိရင်​ အရှက်​ပွား။ ​အော်. . . ဆရာဆိုတာ အဘိဓါန်​ထဲက ဖွင့်​ဆိုချက်ကား 'ထာဝရ ​ကျောင်းသား' တစ်​ဦးတဲ့။ ​ဒါဆို ကိုယ်​လည်း ​သင်​ယူ​ဆဲသူ​ပါ့ပဲ။ (၁၇-၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
နှင်းဆီဘဝ ရေးဖွဲ့သူ- အီဗြာဟိမ်း ရိုးတံစိမ်းထံ ရွက်စိမ်းရံ၍ အဖြူရောင်ခြယ် ပတ္တမြားတစ်ပွင့် ထွန်းလင်းခဲ့လေပြီ။ ဆူးခက်မြိုင်မြိုင် သူပိုင်ဆိုင်၍ ဘဝနှင့် ကံကြား ယုံကြည်မှုနှင့် စည်းလုံးမှု ဖောက်ပြန်သဖြင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီ။ သစ္စာ ရည်စူး တိုင်တည်ညွှန်း၍ ချစ်ခြင်းတွေထဲ စံထားနှိုင်းမဲ့ သက်သေပြခဲ့လေပြီ။ လူ့ဘဝမှာ ငှက်ဘဝလို တစ်အိမ်မှ တစ်အိမ်သို့ တစ်ပြည်မှ တစ်ပြည်သို့် ဒုက္ခမျိုးစုံ ဆူးရင်းကြုံရင်း ခံနိုင်စွမ်းမဲ့ ခက်ခဲမှုများရောက်ခဲ့ပြီ အို နှင်းဆီဘဝ။ ..................**********................... (၁၇-၀၅-၂၀၂၀) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ The Art Garden Rohingya
အနိစ္စ ရေးဖွဲ့သူး- ရိုမရုန်(န) သင့်ရဲ့ သောက၊ မောဟ၊ ဒေါသ သင့်ရဲ့ လောဘ၊ အိပ်မက်၊ မျှော်လင့်ချက် သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ အထီးကျန်မှု အရာခပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားမည့်နေ့ အရာရာချန်ရစ် လက်ဗလာနှင့် ကြင်နာသူလည်းမခေါ်နိုင် ရင်နှစ်သည်းချာလည်းမလိုက်နိုင် စည်းစိမ်ဥစ္စာအကုန်ချန်ရစ်လို့ အထီးကျန်စွာ သွားရမယ့်ဒီခရီး အဖော်ကတော့ ရှိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် နှုတ်ဆိတ်လဲလျောင်းလို့ ကိုယ်နှင့်ထပ်တူ ဒီအမှောင်ကမ္ဘာဝယ် ဘယ်အချိန်ထိနေရမလဲ အဖော်မဲ့စွာ တစ်ယောက်တည်း အနိစ္စရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ။ (၁၄-၅-၂၀၂၀) Editorial Team The Art Garden Rohingya
.. (  )
May 07, 2020 AGR POETRY
ပြုံးစမ်းပါ..မိရို ( ၂ ) ရေးဖွဲ့သူ- ရိုမရုန်(န) ညည်းစိုက်တဲ့ ဒီလယ်မြေပေါ် သူတို့တွေ မတရားကျူးကျော် ကောက်ပဲသီးနှံတွေ သိမ်းကာသွားတယ် မျက်နှာပြောင်တဲ့ သူတို့တွေ လူကိုတော့ မုန်းပါလို့ သူ့လုပ်အားကို မက်ကာမောကြတယ် ပြုံးစမ်းပါမိရို။ ညည်းအိမ်လောင် ပြာပုံအလိမ်းလိမ်းထဲ ကျန်ရစ်နေ အိမ်ငုတ်တိုင်ကို သူတို့တွေ အစဖျောက်လို့ မြေညှိကာ လွင်ပြင်ဖြစ်အောင်လို့ ဖျောက်ဖျက်ကြတယ် သက်သေတွေ ပြုံးစမ်းပါမိရို။ ပြေးလွှားရင်း လမ်းဆုံးရောက်လို့ ကမ်းစပ်နံဘေး ခြေပစ်ထိုင်ကာ လှမ်းမမြင်နိုင် ဟိုဘက်ကမ်းကို ဘယ်လိုများ ရောက်အောင်သွားရမယ် အတွေးပင်လယ်ဝေတယ် ဒီခေါင်းမယ် ပြုံးစမ်းပါမိရို။ အသက်လုပြေး လက်ဗလာနဲ့ ယူမလာနိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်စရယ်မှ ရင်နှစ်သည်းချာကို မြဲမြံအောင်ဆုပ်ကိုင်လို့ တစ်ဘဝစာလုံး ဖုံးကာအုပ်ခဲ့တဲ့ အရှက်သိက္ခာ ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး ထမိန်ကို ခပ်တိုတိုဝတ်ကာ လှမ်းခဲ့ရတဲ့ ဒီခြေလှမ်း ပြုံးစမ်းပါမိရို။ Sn-May,E-06 (6-5-2020) Editorial Team The Art Garden Rohingya #StayAtHomeStaySafe ...
ကောင်းမှုပြုပါ ရမ်ဇာန်မှာ ရေးဖွဲ့သူ- မောင်လတ် ကောင်းမှုပြုပါ မြတ်ရမ်ဇာန်မှာ ဖန်ဆင်းရှင်၏ မိန့်တော်ပါ ကျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်ကာ ဥပုဒ်သီလ ဆောက်တည်ကြ။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ရွတ်ဖတ်ကာ သရားဝိဟ်ပါ ကြိုးဖတ်ပါ။ ဆင်းရဲသူအား ကူညီဖို့ရာ မိုမင်န်အပေါင်း တာဝန်ပါ။ မိဘမဲ့အား စောင့်ရှောက်ကာ ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုကျင့်ရာ နမာဇ်ရိုဇာ လက်မလွတ်ရပါ။ ဇကာသ်ကိုလည်း မြဲပင့်ပေးကာ ထူးကဲလှသော ဒါနတရား ဆွေမျိုးညာတိ ဆင်းရဲသားအား ...
မောငျစဈသညျ ရေးဖှဲ့သူ- ဃာဇီ လှပသာယာ ရှပွေညျသာ၊ ရဲရငျ့လူသား မှေးထုတျထား သစ်စာလညျးရှိ အမြိုးပျေါ၊ တာဝနျလညျးသိ တိုငျးပွညျ၏ ဖှံ့ ဖှံ့ထှားထှား ကိုယျခန်ဓာ၊ လုံ့လကလညျး ကြားပမာ၊ ခှနျအားဗလ ဆငျပွောငျပါ့။ အမြိုးနာလြှငျ သူမခံ ရရာနညျးနှငျ့ ဖေးကူမှနျ လိုရာအကူ တောငျးခံလြှငျ သှေးခြှေးစှနျ့၍ ဆောငျတတျ၏။ အမြိုးဂုဏျကို မွငျ့တငျဖို့ ဇှဲလုံ့လနှငျ့ ရှခြေီ့တကျ၏။ သာသနာကို ဘေးဖယျမထား ကိုယျ့ပါစိတျပါ ယုံကွညျထား အလ်လာဟျအမိနျ့တျောဟူသမြှ ခြိနျမီနညျးမှနျ ကပြှေနျ၏။ သာသနာ့ရောငျ မမညျးအောငျ နရောတကာ အားထုတျ၏။ မှေးသမိခငျ မွတျဖခငျ ကြှေးမှေးပွုစု ဦးထိပျထား မိဘမိနျ့ရာ ခှနျးတျောသာ အစဉျထာဝရ ပထမ ညီငယျမောငျအား ခဈြခငျရာ မိဘကဲ့သို့ စောငျ့ရှောကျ၏။ စီးပှားရေးမှာ ကိုယျ့စှမျးအား မသာမာမှုကို မွဲရှုတျခြ ရောငျးဝယျ၊ ...
ဒုက္ခသည်​​ ရေးဖွဲ့သူ- ဆယာဒ်ဟူဆဲန်း @ ရိုမောင်ကျော်နု ဒုက္ခသည်… ​စခန်းခြံက စိတ်​ကူး​ကြံလေ အ​ရှေ့ဘက်​ဝယ်​ ဇာတိ​ပြည်​ ​ရွှေ​နှယ်တင့်တယ် အာရ်​ကာန်​မြေ ဖူးမော်ချင်သည် ပြန်တလှည့်။ ဒုက္ခစခန်းတွင်းသာ မြဲတစေ ငြိုငြင်စွာနဲ့ ရှင်​သန်​​နေ အနာဂတ်လမ်း မရေမရာတည့်။ လူငယ်​တွေလည်း အလုပ်​လုပ်​ မိန်းမ​တွေလည်း ထင်းခုတ်​ခုတ်​ ဝမ်း​ရေးရှာရန်​ ဟုတ်​မဟုတ်​ လုပ်​သာလုပ်​​နေ ကျွန်​ကုတ်ကုတ်။ ဒုက္ခမျိုးစုံ တို့ကြုံရ ခံနိုင်​စွမ်းမဲ့ ခက်​ခဲမှုများ ​ရေးမဆုံးသည့်​ ဝမ်းနည်းဖွယ်​ရာ ကြုံမြဲကြုံ​နေ အကွေ့အလှည့်။ ဆာ​လောင်​​သော်​လည်း စားမရ စားရင်​လည်းပဲ ဗိုက်​မဝ မျက်​ရည်​​တွေနဲ့ တို့ဘဝ။ ဒုက္ခသည်​ဘဝ ခရီးကြမ်းဟာ ပူပန်​​သောက မျိုးစုံပါ။ အို…ကမ္ဘာ့သူ ကမ္ဘာသား လာ…ခံစားကြည့်​ပါလား။ ...................*************..................... Sn- May, B-03 (5-5-2020) The ...
အပြုံးမဲ့ ငါ့ ကမ္ဘာ ရေးဖွဲ့သူ- ဇာဟီးဒူလ္လာ ( ခ ) မျိုးသွေး လူ့ဘုံအလယ် ငါငမွဲ ဆင်းဆင်းရဲရဲ တဲစုတ်ထဲ နေရာတကာ ခွဲခြားခံရ ဇာတိမြေမှာ ငါ့ဘဝတာ အေးချမ်းမှုနဲ့ ကင်းဝေးလျက်….။ သွားလာခရီး ပိတ်ပင်တား စီးပွားမသာ အိတ်ဗလာ မွေးရပ်မြေမှာ တစိမ်းပါ နိုင်ငံမဲ့ခံ ငါ့ဘဝက ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ ပြည့်စုံလှ….။ ရင်ပြည့်သောက ဖြေမသွား ဖွားတကြွေးကြွေး တတွေးတွေးနဲ့ အိပ်လည်းမပျော် အာရုဏ်ကျော် ဝမ်းတစ်တွာဖို့ ခေါင်းဝင်စားလို့ အမိမြေမှာ… အပြုံးမဲ့ ငါ့ကမ္ဘာ…။ ..........................****************.............................. Sn- May, ...